युएइबाट दशैँमा घर आउने बाचा गरेमा एक नेपालीको निधन - Enepal Serofero
युएइबाट दशैँमा घर आउने बाचा गरेमा एक नेपालीको निधन
पर्वत, २८ असोज । रोजगारीका लागि युएई रहेका एक नेपालीको सुतिरहेको अवस्थामा ज्यान गएको छ। पर्वतको कुश्मा नगरपालिका वडा नं. ७ गोदामका २९ वर्षीय प्रेमबहादुर बस्यालको सुतिरहको अवस्थामा मृत्यु भएको हो।
Prevसेक्स कतिबेला र कतिपटक गर्ने ?
Nextयौनसम्पर्कको यस्तो शैली जुन महिलालाई निकै मन पर्छ!! जानी राख्नुहोस